Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an' i Madagasikara : rajonsarinnyfiainana
Teny iditra Rajon: Sarin' ny fiainana
Mpanoratra Rajon Auguste, 1933/09/08
Lahatsoratra Eny ambony kalesin-dalamby matetika no ahitana ny " sarin'ny fiainana " . Io trano kely miromorimo io no mba " izao tontolo izao " nofintinina hatao indray mijery.
Ao no ahitana ny lafiny mainty amin'izao fiainana izao, toy ny fitiavan-tena, ny fiavonavonana, ny tsy fiheverana ny hafa, ny fanaovana ny tena ho zavatra. Ao koa ny lafiny mahafinaritra: ny fitiava-namana, ny fifanasoavana sy fifanampiana, ny fanetren-tena, ny tsy fanaovana " mamy hanina an-tanana "
Dia hita amin'izahy koa ny toetry ny mpivahiny: ny kivy, ny trotraka, ny tsy miraika, ny falifaly, ny montotra, ny malahelo, ny be fanahiana, ets...
Tamin'ny Alahady hariva taorian'ny fety teo, dia sendra teny ambony kalesin-dalamby avy any atsinanana aho. Endrey ny faha-poretana teny, indrindra hatreo Anjeva! Avy nanao fety teny ambanivohitra angaha ny maro, na avy nitsangantsangana fa Alahady ny andro. Ny kalesy efa hipoky ny avy any atsinanana rehetra any, ny miditra koa anefa izaitratra, ka ny ankamaroany dia vita an-kijorojoro fotsiny teny anelanelan'ny dabilio sy teny an-dava-rangana rehetra teny.
Tao ny vehivavy efa trotraky ny indray andro maninjitra teny ambony kalesy teny ka tsy maharin-doha intsony, tao ny sarotiny ka efa marikivy sy mitampina orona ihany. Indreny kosa ny vao miditra falifaly endrika, be resaka, mihomehy lava.
Tsy ny fiainana an-tany ve izany? Ao ny efa itambesaran'ny taona maro nivahiniana teto ka mitanondrika lava. Ao ny ianjadian' ny aretina samihafa, ka toa mivoadivoady ny hialana eto. Fa ao kosa ireo mbola amirapiratan'ny fanambinana sy ny fahasalamana, ka mameno hehy ity gilaoby, lazain'ny sasany ho " lohasahan-dranomasina " ity.
Anankiray amin'ireo farany ireo ity zazavavy kely mivimbina vonin'akasia: mifanosy mihitsy ny mpandeha, " nifanery toy ny saridinina" hoy ny Vazaha. Tsy foin-dRazazavavy hosimba izato voninkazo nanoin-tsarotra, angamba notazanatenyamin'nyhazonanalokaloka ny lala-nombana, ka miherikerika mitady toerana azo isisihana izy. Teo akaikin'ny varavarankely anankiray no nisy nalaladalaka kely ka dia nifindra teo Razazavavy, sady nahazo rivotra mangatsiatsiaka no mba nanome ny manodidina fofo-manitra koa tamin'ilay vo-ninkazony, (fa efa nanempotra ny fofon'akondron-dry zareo mpandeha, novidiny hatrany Anjiro).
Moa va tsy fotografia iray amin' ny fiainana koa io tanora io sy ny voninkazony? Izany no toy ny fanantenana mitondra hanitra tsy hampamoifo eto ambonin'ny tany: reraky ny dia ny mpivahiny, trotraky ny adim-piainana maro samihafa, mila hamoifo, mila hanozona ny androny. Mitranga Rafanantenana, tovovavy soa, mivimbina ny voninkazon'ny fiononana eny an-tanany. Mody indray ny aina. Mihenjana ny hery rehetra hanetra ny sarotra sy ny mafy, ka tsy ho kivy hanefa ny adidy.
Misaotra, Rafanantenana, fa raha tsy ianao, efa tsy hita isa no niantso ny fasana hitahiry ny nofony!...
Izany no mba santionan-tsary kelin'ny fiainana, hita eny am-pivahiniana.
Mandiniha, fa ahazoam-pianarana avokoa izay rehetra jerena!